Bloodshot (2020) – MM Subtitles
Video Sources 6005 Views Report Error
Action, Drama, Sci-Fi ကားတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Movie Lover တွေအတွက် Rating 5.7 ရရှိထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ ကားကောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ကျွန်တော်တို့ Fast & Furious ကားတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားကြီး ဗန်ဒီဇယ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖိုက်တင်တွေနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ဗန်ဒီဇယ်ကတော့ အမေရိကန်တပ်ရင်း တစ်ခုက ခေါင်းဆောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတာဝန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ကျေအောင်ထမ်းဆောင်ရင်း ချစ်ဇနီးရှိတဲ့ အိမ်ကို ရောက်အောင်အမြဲပြန်လာတတ်တဲ့သူပါ။ ဒါပေမဲ့လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုကနေ သူနဲ့ချစ်ဇနီးကို ဖမ်းခေါ်ပြီး သူ့မျက်စိရှေ့တင် သူ့ဇနီးကို သတ်ပစ်ခဲ့တဲ့အပြင် သူ့ကိုပါပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ ဗန်ဒီဇယ်မှာ သေသွားတဲ့သူကို ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ ခေတ်မှီနည်းပညာ တစ်ခုကြောင့် အသက်ပြန်ရှင်လာရပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အနေနဲ့ဘာဆိုဘာမှ မမှတ်မိတော့ပါဘူး သူပြန်မှတ်မိလာတဲ့အခါတော့ သူ့မိန်းမကိုသတ်ခဲ့တဲ့သူကို ပြန်သွားသတ်ဖို့သွားပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ သူဟာသေရာကရှင်လာတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့လား? သူ့ဇနီးကိုသတ်ခဲ့တဲ့သူကို သူပြန်သတ်ခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီလူက ရော သူ့ဇနီးကိုတကယ်သတ်ခဲ့တဲ့သူ ဟုတ်ရဲ့လား? ဆိုတဲ့လှည့်ကွက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ရုပ်ကူးထားတဲ့ သိပ္ပံအက်ရှင် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
အက်ရှင်ကားတွေကြိုက်တတ်တဲ့ ပရိသတ်တွေ အခိုက်တွေ့စေမယ့် ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်တွေလည်းပါတာမို့ ကြည့်ရှုခံစားဖို့တိုက်တွန်းရင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Bloodshot ဆိုတဲ့ အက်ရှင်ကားကောင်း လေးကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
Translator…..: Lwin Moe Thwin
IMDb Rating 5.7 40,402 votes
TMDb Rating72,539 votes
Download 480p G Drive 413 MB
Download 480p Yandex 413 MB
Download 480p MyanCloud 413 MB
Download 720p G Drive 718 MB
Download 720p Yandex 718 MB
Download 720p MyanCloud 718 MB